हिउँदमा, तेजी कुनै पनि कार इन्जिन शांत हुनेछ। र तल्लो तापमान, सुरु बनाउन गाह्रो। यसबाहेक, मोटर को पुन ताप इन्धन खपत मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ, र बस समय हानि गर्न जान्छ। खुसीको कुरा, मोटर वाहन संसारमा त्यहाँ इन्जिन वार्मिंग लागि विशेष सुविधा छन्। यो जाडो मा चालकहरुको लागि उपयोगी छ भन्दा यस लेखमा हामी के हीटर गर्न "Avtoteplo" इन्जिन मा, हेर्न हुनेछ।
Avtoodeyalo - जसबाट इन्जिन काम सिर्जना गर्मी बचत, पूर्ण हुड स्पेस शीर्ष कवर जो कार, को लागि इन्सुलेशन एक प्रकारको। किनभने यसको विशेष संरचना को, उपकरण तातो हावा हुड र अन्य धातु तत्व, खुलने र प्वालहरू मार्फत बाहिर हतार गर्न अनुमति छैन। यस्तो इन्सुलेशन स्थापना गर्दा बहिष्कृत छ, जो धेरै मोटर चालकहरुलाई डर मोटर, को यसरी तात्दै।
किन यति चाँडै बाहिर गर्मी?
कारण इन्जिन डिजाइनमा निहित - अर्थात्, सामाग्री जो देखि यो बनेको छ। को भागहरु (विशेष गरी बाह्य) को सबैभन्दा उच्च थर्मल चालकता छ जो एल्यूमीनियम, को गरे। त्यसैले, पनि उत्तेजक इन्जिन निष्क्रियता को एक वा दुई घण्टा पछि शांत गर्न सक्नुहुन्छ। फलस्वरूप, यस्तो कार धेरै गाह्रो छ छ, र यो ब्याट्री वा पहना स्टार्टर तल चलान गरेको छ भने, यो असम्भव छ।
यसलाई कसरी प्रभावकारी छ?
समीक्षा द्वारा न्याय, "Avtoteplo" इन्जिन - यो इन्जिन कक्ष भित्र गर्मी राख्छ कि एक साँच्चै राम्रो कुरा हो। Avtoodeyalo मोटर को गर्मी हानि को दर लगभग दुई पटक छ slows। तसर्थ, इन्जिन माथि छ घन्टा लागि न्यानो रहन्छ। त्यस माथि हिउँदमा खपत कुल इन्धन को बीस प्रतिशत बचत यसरी यो थप ताप आवश्यकता छैन। सुरु तापमान लागि जाँदा, एक वाहन जो त्यहाँ "Avtoteplo" avtoodeyalo माइनस 30-36 मा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ डिग्री सेल्सियस।
थर्मल विसंवाहक फरक दृष्टिकोणबाट उचित छ प्रयोग गर्नुहोस्। पहिले, "Avtoteplo" मोटर लागि हीटर Icing मोटर तंत्र कि -60 डिग्री सेल्सियस को एक तापमान मा रन उत्पादन गर्न अनुमति रोक्छ। दोस्रो, avtoodeyala प्रयोग गर्दा तपाईं बारम्बार वार्मिंग लागि कुनै आवश्यकता हुनेछ। इन्धन खपत र समय बचत (प्रति महिना कार 10 प्रतिशत कम इन्धन खर्च हुनेछ) (न्यानो-अप पछि कम्तिमा 5-15 मिनेट खर्च गर्न आवश्यक): यहाँ एकैचोटि दुई समस्या हल छन्।
"Avtoteplo" इन्जिन को राम्रो इन्सुलेशन अरू के छ? चालक को समीक्षा कारण सानो घर मा इन्जिन को ढिलो ठंडा र द्रुत सुरु गर्न सधैं एक आरामदायक तापमान राखिएको छ, भन्छन्। कम से कम, यो तुरुन्तै न्यानो जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु चलिरहेको छ जो ओवन, वृद्धि गर्न सम्भव हुनेछ। तपाईं एक बरफ कुर्सी मा बस्न र आफ्नो हात चिसो स्टेरिड़ मा न्यानो घर वा कार्यालय पछि राख्न हुँदा शायद हरेक चालक भावना थाहा छ। avtoodeyala स्थापना गरेपछि राम्रो को लागि एक समान मुद्दाको बारेमा भूल हुनेछ।
तेस्रो, "Avtoteplo" (कम्बल इन्जिन) पूर्ण ध्वनि इन्सुलेशन को समस्या solves। विशेष गरी यो प्रश्न घरेलू कार को मालिक को लागि वास्तविक छ। पनि उपकरण यसलाई mechanically हटाउन प्रयास छ भने एकदम, शरीर को paintwork बिगार्न सक्छ जो हुड, मा बरफ को गठन रोक्छ। बरफ कारण बाहिरी वातावरण संग इन्जिन डिब्बे को कम गर्मी गर्न हुड मा देखिने छैन। त्यो छ, पानी (condensate) बस paintwork मा स्थिर समय छैन।
तर छैन "Avtoteplo" बाट कंबल को सबै सुविधाहरू छ। समीक्षा चालक यो इन्सुलेशन को लाभ को एक मात्र दुई तीन किलोग्राम छ जो आफ्नो प्रकाश वजन, छ, भन्नुहोस्। यो थर्मल विसंवाहक सजिलै सम्मिलित वा आवश्यक हटाउन सकिँदैन।
को गर्मी, "Avtoteplo" इन्जिन मा हीटर कहाँ भण्डारण गर्न? समीक्षा चालक उहाँले किनेको थियो जसमा एउटै थैली मा राखिएको गर्न सकिन्छ भन्ने। Avtoodeyalo तह डराएका छैन, यो छैन फलाम गर्न आवश्यक छ र प्रयोग गर्नु अघि धुन। खैर, तापमान यसको उच्च प्रतिरोध धन्यवाद मरम्मत र वेल्डिंग काम समयमा एक केप रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर पूर्ण भएको चटाई वा मैट को समारोह सामना avtoodeyalo प्रकृति कुन मा सुत्न वा उत्पादनहरु राख्न। बहुमुखी बस कुनै सीमा छ।
र, को पाठ्यक्रम, पारिस्थितिकी बारे मा भूल छैन। उच्च तापमान मा यो एक विशेषता गंध, भित्र पस्नु र ओवन सीट कवर भिजेको गर्न सक्नुहुन्छ जो फेंकना छैन avtoodeyalo।
नकारात्मक पक्षहरू लागि जाँदा, तिनीहरूले avtoodeyala बस गर्दैन छ। सायद यसको मात्र drawback - यो असम्भव 1-2 दिनको अवधिका लागि गर्मी राख्ने छ। बाँकी, यो हिउँदमा हाम्रो क्षेत्र को चालकहरुको लागि ठूलो छ।
निर्माण को सामाग्री
यो उपकरण यसको गुण मा गर्मी धेरै प्रतिरोधी छ ऊन mullitokremnezomistoy, बनेको छ। प्रयोग समयमा यो "Avtoteplo" (इन्जिन लागि कम्बल) 1100 डिग्री सेल्सियस को एक तापमान मा ignited छ फेला परेन। कपास यस प्रकारको आत्म-ज्वलन गर्न सबैभन्दा प्रतिरोधी छ। हामी खातामा मोटर सिलेंडर शक्ति 120 डिग्री (180 को अधिकतम) सम्म गरम छ भन्ने तथ्यलाई लिन भने, बिल्कुल सुरक्षित avtoodeyalo को "Avtoteplo" प्रयोग गर्नुहोस्।
खैर, mullitokremnezomistaya ऊन यो माध्यम बिजुली सञ्चालन गर्दैन, त्यसैले यसलाई मा ब्याट्री को टर्मिनलहरु संग सम्पर्कमा आउँछ भने नडराऊ। साथै, यो सामाग्री ताप द्वारा विषाक्त तत्व फेंकना छैन। किनभने उहाँले चित्रित कहिल्यै छ।
avtoodeyal अन्य सामाग्री
avtoodeyal निम्न घटक लागि आधारमा mullitokremnezomistoy ऊन बाहेक प्रयोग गर्न सकिन्छ:
लाग्यो। यो सायद यो उद्देश्य लागि अस्तित्व मा गैर-fireproof सबैभन्दा खतरनाक र भौतिक छ। Flashpoint एक सानो कम 300 डिग्री सेल्सियस भन्दा महसुस गरिएको छ। यस कारण, धेरै निर्माताहरु यो सामाग्री बाल्न कारण जो गर्दैन र बिना ज्वाला उठे जलना विशेष पदार्थ, संग व्यवहार गर्छन्। तर सबै नै यो कार मा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
रेशा। 650 डिग्री सेल्सियस यसको न्यूनतम ज्वलन तापमान। इन्सुलेशन ग्लास ऊन को आफ्नो कार्य गर्छ राम्रो, त्यसैले यसलाई व्यापक कंबल को विचार को लागि एक आधारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
उत्पादन को एक घटक यसलाई विशेष ज्वाला-retardant सूत्रहरू संग सिलना छ सिर्जना अन्तिम चरणमा गरिएको थियो, चाहे र विसंवाहक सतह दर्पण फिलिम ढाकिएको छ बिना। यो डिजाइन भन्दा सुरक्षित र प्रयोगको लागि स्वीकार्य छ।
मालिक को समीक्षा हीटर अन्य ब्रान्डहरु तुलनामा "Avtoteplo" मुद्रा को लागि उच्चतम सम्भव मूल्य छ भन्छन्। जबकि धेरै कम्पनीहरु सस्तो ग्लास भौतिक रूपमा प्रयोग, त्यसपछि निर्माता मानव शरीर को लागि सुरक्षित छ र भारी थर्मल लोड सामना गर्न सक्छन् जो केवल उच्च गुणवत्ता mullitokremnezomistuyu ऊन, प्रयोग गर्दछ।
यो इन्जिन कक्ष मा फँस प्राप्त गर्न सक्छन्?
यसको संरचना मा, थर्मल isolator धेरै बाक्लो उहाँले समय बेल्ट, शून्य द्वारा rewound गरिने जोखिम छ, र यसैले। साथै, पनि प्रति घण्टा एक सय किलोमिटर गति मा कम्बल इन्जिन मा दृढ रहन हुनेछ भनेर आधुनिक वाहन को ढाँचा इन्जिन कक्ष डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। मात्र कुरा के तपाईं उत्पादन राम्ररी स्थापना गर्न आवश्यक छ।
Avtoodeyala स्थापना कुनै विशेष कौशल वा उपकरण आवश्यक छ। हीटर स्थापना गर्न, इन्जिन को या त पक्षमा उसलाई पर्याप्त। यो इन्जिन कक्ष मा सबै चर्किएको र अंतराल ढाकिएको भनेर स्थापना को अन्त मा avtoodeyalo लगायो गर्नुपर्छ। पनि वी-बेल्ट रोलर्स नोट - तिनीहरूले chafing को सम्भव जोखिम रूपमा हीटर को सतह संग सम्पर्क मा हुनु हुँदैन।
तापमान -5 डिग्री सेल्सियस को स्तरमा कम छ जब विसंवाहक को बिछाउने चिसो को पहिलो घटना मा सिफारिस गरिएको छ। राति Avtoodeyalo गोली मार आवश्यक छैन। धेरै चालक, निम्नानुसार अगाडि बढ्न: देर पतन मा एक थर्मल विसंवाहक स्थापना र प्रारम्भिक सम्म उसलाई सवारी - मध्य-वसन्त (पहिलो हिउं पग्लनु अघि)।
म यो रजाई धुन सक्छन्?
हामी सुझाव दिन्छौं छैन धुने हीटर "Avtoteplo"। मालिक को समीक्षा त्यहाँ बाहिरी खोल गर्न क्षति को एक जोखिम छ बाहेक यस कार्यका पछि, उत्पादन धेरै गाह्रो हुनेछ सुक्खामा भन्छन्। तसर्थ, हाजिर कम्बल मा गठन भने तिनीहरू सुक्खा-सफाई हालतमा लागि हटाइएको हुनुपर्छ। सामान्य मा, जस्तै लाँड्री रूपमा यस्तो प्रक्रिया, teploodeyalu आवश्यक छैन। धेरै कम से कम, चिसो जाडो समयमा के गर्नु हुँदैन। गुण इन्सुलेट अझै पनि स्थलहरू बिगार्छ छैन।
त्यहाँ एक वैकल्पिक छ?
तपाईं एक हीटर रूपमा पुरानो Sweatshirts र वस्त्र अन्य वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने, तपाईंले गहिरो गलत छन्। यस्तो भेरिएसनहरूमा आफ्नो दहन तापमान महसुस भन्दा कम छ बस किनभने तिनीहरूले खतरनाक छन् के बेकारी छन् (किनकी यो एक मोटर क्षेत्र कब्जा छैन) छैनन्। साथै, Sweatshirts प्रयोग गर्दा त्यहाँ कपडे alternator बेल्ट वा एक ventilator मा rewound भन्ने एक जोखिम छ। यस मामला मा, कार महंगा मरम्मत गर्न आवश्यक हुनेछ, र निकट भविष्यमा यात्रा बारे भूल हुनेछ।
उत्पादन ब्रान्ड "Avtoteplo"। मूल्य
रूस मा इन्सुलेशन औसत लागत "Avtoteplo" वरिपरि 1400-1500 rubles छ। तपाईं न्यानो गर्न आवश्यक छ भनेर इन्धन को राशि संग मूल्य तुलना भने, हामी यो संस्करण छिटो payback छ भनेर भन्न सकिन्छ। यस मामला मा, लिमिटेड "Avtoteplo" यो उत्पादन प्रयोग को लागि एक वर्ष वारेन्टी दिन्छ। तर, व्यवहार मा, एक हीटर चार वा पाँच मौसम हुन सक्छ विचार।
जब तपाईं खरीद fakes को wary हुनुपर्छ। LLC "Avtoteplo" को यो उत्पादन सबै आवश्यक प्रमाणपत्रहरू छ र नवीनतम पर्यावरण स्तर पूरा गर्दछ। मूल्य को कंबल हजार rubles तल छ वा विक्रेता माल लागि कागजात प्रदान गर्न इन्कार गरेको छ भने, यस्ता उत्पादनहरु खरिद को advisability शङ्का गर्ने कारण छ। साथै, यो एक बक्स मा पैक हुनुपर्छ, वा कम से कम जो सूचीबद्ध कम्पनीहरु र यसको नाम विवरण हो एक विशेष प्याकेज, राख्नुभयो।
को चालक विशेष गरी कम्बल "Avtoteplo" सम्झना? समीक्षा अक्सर ध्वनि इन्सुलेशन को सुधार मा जानकारी। avtoodeyalo पूर्ण ध्वनि कंपन को अवशोषित किनभने यो, सजिलै व्याख्या गरिएको छ। यस मामला मा, यो गर्मी बाहिर हतार गर्न अनुमति छैन। साथै, मोटर चालकहरुलाई छिटो इन्जिन न्यानो-अप भन्छन्। कहिलेकाहीं यसको लागि आवश्यकता पूरै निर्मूल। सामान्य avtoodeyalo यो चिह्न हिउँदमा एक चालक लागि अपरिहार्य रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन।
डिजेल वाहन मा प्रयोग को जोडतोडले
समीक्षा द्वारा न्याय, "Avtoteplo" - सबैभन्दा प्रभावकारी विरोधी-फ्रीज डिजेल इन्जिन को छ। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ रूपमा, चलाउन नकारात्मक तापमान मा एक मोटर धेरै गाह्रो छ। यो कारण डिजेल इन्धन को कम चिपचिपापन छ। -5 डिग्री मा यो thicken थाल्छ, र तापमान अझै कम पतन भने, "डिजेल तेल" त्यसैले यो फिल्टर पास गर्न सक्षम छैन भन्ने freezes। हो, विभिन्न Antigel यो स्थितिमा मद्दत गर्न सक्छ। अझै द्रवीभूत इन्धन छैन इन्जिन को एक सफल सुरु लागि पर्याप्त छ (पेट्रोल कार हुनेछ अन्यथा कारखानों र -50 मा)।
अधिकतम गर्मी कसरी राख्ने सक्नुहुन्छ?
अक्सर बाहेक चालक "Avtotepla" रेडिएटरको जंगला मा माउन्ट विशेष प्लास्टिक प्लग प्रयोग गर्न। तर गत्ता टुक्रा लागि वैकल्पिक रूपमा ठीक छ। यस मामला मा, इन्जिन सार्न शांत छैन, र वार्मिंग र पूर्ण गायब आवश्यकता।
त्यसैले, हामी "Avtoteplo" उत्पादन के यो हिउँदमा मोटर चालकहरुलाई लागि उपयोगी छ, के समीक्षाएँ छ के फेला परेन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो हीटर प्रयोग तपाईं हरेक दिन इन्जिन माथि वार्मिंग मा बिताएको समय, इन्धन र प्रयास धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
Porsche Macan टर्बो -5लाख लागि नयाँ जर्मन कार, आदर को एक कुरा
मित्सुबिशी GALANT VIII - वहन व्यापार-वर्ग कार
एक मानिस र महिला को सफलता को रहस्य कसरी बहकाउने?
कल्पना उडानको लागि खुल्ला ठाउँ - आफ्नो हातमा slabs फर्श लागि प्रकारका!